Date My Pet » 5 Very saina (Fa Marina) Zavatra ny hampiaraka Tsara ho Fantatrao!
5 Very saina (Fa Marina) Zavatra ny hampiaraka Tsara ho Fantatrao!
Mety ho tena mahaliana rehefa manao fikarohana sy hahita zavatra mbola tsy fantatsika momba izao tontolo izao ity ny mampiaraka. Zava-misy ny sasany mamaky Afaka manampy ny antony mba hahazo ny trano na ny fampakaram-bady fanalahidy fanasana ny hafa kosa azo miady, na dia mahaliana fotsiny. Mipetraka, tia sy ho gaga amin'ny zava-misy ireo mampiaraka dimy!
Toeram-piasana Romances Tsy fomba iray fotsiny mizara ny andro!
Fifandraisana amin'ny loharano nipoirantsika tao amin'ny toeram-piasana manana fifandraisana mahagaga avo dia avo ny tahan'ny fahombiazana amin'ny momba ny 40% ny asa romances tsy ampy amin'ny fanambadiana izay mahagaga amin'ny heviny ny Nisy olona maro izay tsy ho velona fa isaky ny hafa’ am-paosin'ny amin'ny toy izany, fa tamin'izany andro izany dia tsy mahagaga tanteraka. Angamba ianao tia izay ataonao. Angamba izy ireo manao izany koa efa manan-javatra iombonana amin'ny izy samy izy ary dia mandany fotoana maro hiara-fa raha misy hery manintona eo amin'ny andaniny roa misy vintana tsara izany dia hitombo mety ho fitiavana.
Safosafo sy Chemistry.com Syndicate tany aloha dia efa nampiseho fa ny vehivavy ao amin'ny bar dia niresaka ny iray minitra eo ho eo ny enina haingana kokoa raha manao ny akanjo-up. Mihevitra aho fa ho an'ny ankamaroan'ny hafa fancies olona iray raha misy olona ary dia somary mandroso na chatty dia hiresaka anao ihany fa hoe heveriko fa afaka manampy. Afaka manarona ny tsiny ary hahatsapa ny vonona ny handray an 'izao tontolo izao. Na dia izany fahatokiana na ny zava-misy ny toerana tsy mampiseho mahazo anao ilay olona tianao misokatra ny miady hevitra!
Nofinofy momba ny firaisana!
ABC nitatitra fa ny firaisana ara-nofo no tena fahita nofinofy dia firaisana ara-nofo amin'ny any ivelany 57% raha 14% efa nanana threesome sy 21% tamin'izy ireo no nieritreritra izany. Tsy ampy ny fahadimy nilaza fa efa voafitaka teo amin'ny mpiara-miasa, fa momba ny ampahatelon'ny ireo no fantasized momba ny fangalana. Ny antsasany mahery kely Amerikana milaza fa izy ireo dia misokatra ary iaraho midinika ireo manonofinofy miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka. Heveriko fa be fa efa maro no misokatra amin'ny mpiara-miombon'antoka momba ny zavatra excites azy ireo firaisana ara-nofo nefa heveriko angamba aho tokony hanafina ny “I fantasized ny mifraody anao hany malalako.” tsipika!
Telo Tsy A Vahoaka!
Nisy olona hitany fa sarotra ny-dresaka tao amin'ny hetsika ara-tsosialy raha misy namana roa miara-mitsangana ka dia hanintona azy ny iray tamin'izy ireo. Tsy te ny namana hafa mba nahatsiaro ho nafoin'i ny namana. Noho izany raha mitady ny mahita fa misy olona manokana hitondra namana roa miaraka!
New York sy Washington manana panjakana indrindra ireo mponina izay tsy manam-bady. Teo aloha dia 50% ary ny farany dia 70% ka mahazo ny any New York sy Washington hampiaiky volana! Eo amin'ny lafiny fanambadiana ambony fanjakana amin'ny isan-jato misy Idaho sy Utah amin'ny 60% ary 59%.